Tenin’ny Lehiben’ny Faritra – Région Haute Matsiatra
Mots du Gouverneur
Tenin’ny Lehiben’ny Faritra
Miarahaba antsika aby Tompoko,
Efa mananika ny dimy hetsy sy iray tapitrisa eo zao ny mponina ato amin’ny Faritra Matsiatra Ambony ao anatin’ny velaran-tany 2 alina km2 ato amin’ny kaominina 91 ka ny 88 amin’izany dia Kaominina ambanivohitra avokoa . Misy kaominina 9 vaovao koa amin’izy ireo ka ilana fanamboarana fotodrafitrasa fototra vaovao raha tsy hilaza afa-tsy ny Birao hiasan’ny Ben’ny Tanàna isika.
Manana Ben’ny Tanàna 91 ny Faritra Matsiatra Ambony. Miarahaba azy ireo amin’ny andraikitra napetrakin’ny vahoaka amin’izy ireo ary mirary azy ireo hahaleo ahalasana. Ahavita be amin’ny fampanantenana nataon’ izy ireo ho amin’ny fampandrosoana. Isaorana manokana ny fitondram-panjakana izay tarin’ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina satria dia afaka miara-miombon’antoka ao anatin’ny Mpanolotsaina ny tanàna avokoa na ireo mpifanina tamin’ny Fifidianana Ben’ny Tanàna aza. Satria tokoa mantsy izy ireo dia efa samy nanana vinavinan’asa avokoa ka ny fampitambarana ny hery dia ho fanoitra ho amin’ny fampandrosoana.
Mitodika manokana amin’ny Ben’ny Tanàna ny tenako amin’ny maha Lehiben’ny Faritra: hifanome Tanana isika, hifampihaino isika, hifampizara vaoavo isika, handray andraikitra isika ho an’ity Faritra Matsiatra Ambony mamintsika ity.
Manana ny drafitrasa fapandrosoana ny Faritra Matsiatra Ambony izay notsoahina avy amin’ny PND na ny Paikady Natao Dinasa.
Fametrahana fandriampahalemana maharitra: tohizana ny fitandroana ny filaminam-bahoaka na eto andrenivohitra na eny ambanivohitra izay anamafisinahatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo Mpitandro filaminana, hatao ny fampiharana ny DINA. Ny fanatsarana hapetraka dia ny fiomanana sahady amin’ny izay mety ho fampiasana ireo teknolojia vaoavaon’ny fifandraisana hiadiana amin’ny asan-dahalo. Satria ny fandriampahalemana dia antoka iray lehibe ahfahan’ny tsirairay manatontosa ny adidy sy andraikiny avy indrindra ny foto-pivelomana.
Tontolo iainana voaaro: hatao tanjona ato amin’ny Faritra ny fametrahana tontolo maintso voajary isaky ny kaominina, isaky ny sekoly..
Fanatanjahatena hanampy amin’ny fitaizana tanora: hapetraka ato amin’ny Faritra ny Kitapo iombonana ho fampiroboroboana ny fanantanjahan-tena ka hisy hetsika ara-panatanjahatena iray lehibe ho tanterahina.
Kolon-tsaina sehatra natao hampiombona: hatao tsy ho ela ny famaritana sy fametrahana hestika ara-kolotoraly manasongadina ny Faritra.
Harena ankibon’ny tany: hatsaraina ny fitantanana sy fintrandrahana misy hifanaraka amin’ny didy amam-pitsipika manan-kery mba hitondra fivoarana tokoa ho an’ny Kaomina sy ny Faritra.
Araka ny efa voalaza teo ambony dia hanao ezaka manokana ny Faritra ny hampiasa ireo teknolojia vaovao ny fifandraisana hanampy ireo tondrozotra hitondra fampandrosoana: hapetraka ny tranokala-pifandraisana na site-web ny Faritra. Hisy fandaminana hatao ihany koa hanatsarana ny fifandraisana amin’ireo samy Ben’ny Tanànan sy ny Faritra.
Hatao laharam-phamehana ny fandrindrana ireo tetik’asa maro efa misy eto an-toerana entina hanatsarana ny lafiny fambolena sy ny fiompiana izay asa fototra ho an’ny mponina aty amin’ny Faritra. Tsy ho adinoina velively toy izany koa ny lafiny fahasalamana, ny fanabeazana ny tanora sy ny fizahan-tany izay tsindrina ihany ito farany amin’ny fanatsarana ny zotra andalamby izay fanoitra lehibe ho an’ny fizahantany eto Fianarantsoa.
Eto ampamaranana dia tiako ny mampatsiahy ny teny filamatra ny Faritra manao hoe: “ ‘Zay soa raha atao ro mivoatsa”. Manana ihany koa ny VINA:
“Tontolo iainana voaaro, tontolo ambanivohitra milamina, ny Ona zemina, Matsiatra Zina, Any Andafindriaka ro hatao Tsiena”.
Efa vonona izahay ato amin’ny Faritra sy ireo Kaominina 91 izay tarin’ny Ben’ny Tanàna sy ireo Mpanolo-tsainany avy hitondra ny fampandrosoana ato amin’ny Faritra.Efa maro ireo fotodrafitrasa sy tetik’asa napetraka teto amin’ny Faritra. Koa dia manantena ny hitohizan’izany hatrany avy amin’ny fitondram-panjakana izay tarihin’ Atoa Filohan’ny Repoblikan’I Madagasikara Hery Rajaonarimampianina izahay aty amin’ny Faritra Matsiatra Ambony.
Taonan’ny asa ity taona 2017 ity ho Fisandratana Mirindra. Mankasitraka sy Mankatelina Tompoko.